Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 85 Haiwa Jehovha, makafarira nyika yenyu;+Makadzosa vanhu vaJakobho vakanga vatapwa.+ 2 Makaregerera kukanganisa kwevanhu venyu;Makakanganwira* zvivi zvavo zvese.+ (Sera) 3 Makadzora hasha dzenyu dzese;Makazvidzora pakushatirwa kwenyu kukuru.+ 4 Tidzorerei pataimbova,* haiwa Mwari weruponeso rwedu,Uye isai kure nemi kutitsamwira kwamakaita.+ 5 Mucharamba makatitsamwira nekusingaperi here?+ Muchaita kuti hasha dzenyu dzisvike kuzvizvarwa nezvizvarwa here? 6 Hamusi kuzotimutsidzira zvakare hereKuti vanhu venyu vakufarirei?+ 7 Haiwa Jehovha, tiratidzei rudo rwenyu rusingachinji,+Uye tipei ruponeso rwenyu. 8 Ndichateerera zvinotaurwa naMwari wechokwadi Jehovha,Nekuti achataura nezverugare kuvanhu vake+ vakavimbika,Asi ngavarege kudzokerazve pakuzvivimba.+ 9 Chokwadi ruponeso rwake ruri pedyo nevaya vanomutya,+Kuti kukudzwa kwake kugare munyika yedu. 10 Rudo rusingachinji nekutendeka zvichasangana;Kururama nerugare zvichatsvodana.+ 11 Kutendeka kuchamera panyika,Uye kururama kuchatarisa pasi kuri kudenga.+ 12 Jehovha achapa vanhu zvakanaka,*+Uye nyika yedu ichabudisa goho rayo.+ 13 Kururama kuchafamba pamberi pake+Uye kuchagadzirira tsoka dzake nzira.
^ ChiHeb., “Makafukidza.”
^ Kana kuti “Tiunganidzei zvakare.”
^ Kana kuti “achaita kuti vanhu vabudirire.”